Google wuxuu ku shaqeeyaa nooc ka mid ah Android taleefannada fudud | Androidsis
Eder Ferreno | | Noocyada Android
Noocyada qaarkood waxay sii wadaan inay soo saaraan waxa loogu yeero telefoonnada fudud. Moodello leh kumbuyuutar oo aan lahayn nidaamkooda hawlgalka sida Android. Sanadahan waxaan aragnay moodooyin sida Nokia 3310 owl Nokia 8810. Laakiin Google sidoo kale waxay indhaha ku haysaa taleefannadan. Maaddaama shirkaddu ka shaqeyn doonto nooc ka mid ah Android Oreo moodooyinkaas.
Sidan oo kale, taleefannadaas aan haysan shaashad taabasho, sida kuwa aan kor ku soo sheegnay, waxay lahaan karaan nooc ku habboon ee Android Oreo kiiskaaga. Maxaa u ogolaanaya leeyihiin nidaamka qalliinka si uun. Waxay umuuqataa inay tahay mashruuc shirkadu in mudo ah ka shaqeyneysay.
Waqtigan xaadirka ah waxaan heleynaa noocyada kala duwan ee nidaamka qalliinka. Loogu talagalay taleefannada casriga ah ee ugu hooseeya ee ku jira heerka ugu hooseeya, Google leeyahay Android Go. In kasta oo xaaladdan ay jirto, shirkaddu waxay dooneysaa inay la xiriirto dhagaystayaal badan iyadoo soo bandhigaysa nooc gaar ah. Waxaa loogu talagalay badanaa suuqyada soo baxaya, halkaasoo noocyada taleefannada si caadi ah wax badan looga furo.
Waqtigan xaadirka ah ma jiraan faahfaahino aad u tiro badan oo ku saabsan qaabkan nidaamka qalliinka. Shaashadaha shaashadda qaarkood ayaa ku wareegaya khadka tooska ah oo muujinaya habka uu u muuqdo in barnaamijka Google Chrome uu ula jaanqaadi karo taleefanka noocan ah. Laakiin ilaa hadda suurtagal ma ahayn in la xaqiijiyo inay run yihiin iyo in kale.
Xaqiiqdii waxay ahaan laheyd go'aan xiiso leh qeybta Google. Maaddaama moodellada sida Nokia 3310 ama 8810 laga bilaabay suuqyada halka telefoon raqiis ah ayaa loo baahday. Markaa haysashada nooc ka mid ah Android oo iyaga loo qaabeeyey waxay u oggolaan kartaa adeegsadayaashan inay yeeshaan taleefan casri ah oo aan ka bixin qaab jaban.
Ma jiraan wax faahfaahin ah oo ku saabsan, Google midkoodna waxba kama uusan sheegin qorshayaashan. Marka waa inaan in yar sugno inta aan ka ogaanayno wax ku saabsan noocaan ah Android taleefannada fudud. Xaqiiqdii waxay u egtahay qorshe xiiso leh. Laakiin ma ogin haddii ay ku dambayn doonto inay dhacdo iyo in kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Noocyada Android » Google ayaa bilaabi doonta nooc ka mid ah Android Oreo oo loogu talagalay taleefannada fudud